Kooxaha Bayern Munich,Wolfsburg,Moenchengladbach iyo Bayer Leverkusen oo Guulo Gaaray “Sawirro” – Radio Muqdisho
Kooxaha Bayern Munich,Wolfsburg,Moenchengladbach iyo Bayer Leverkusen oo Guulo Gaaray “Sawirro”
Kooxda Borussia Dortmund ayaa waxaa garoonkeeda Signal Iduna Park 0-1 uga badiyay kooxda Bayern Munich.
Ciyaaryahan Robert Lewandowski oo horey ugu ciyaari jiray kooxda Dortmund ayaa daqiiqadii 36-aad ee qeybtii hore ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Bayern Munich.
Kooxda Bayern Munich oo uu hogaamiyo macalin Pep Guardiola ayaa horyaalka Jarmalka ku hogaamineyso 67-dhibcood,halka kooxda Borussia Dortmund ay horyaalka uga jirto kaalinta tobanaad,iyadoo leh 33-dhibcood.
Kooxda Wolfsburg ayaa sanadka soo socda ciyaari doonto koobka Champione League-ga,ka dib markii ay garoonkeeda Volkswagen Arena 3-1 uga badisay kooxda VfB Stuttgart.
Ciyaaryahan Ricardo Rodriguez ayaa labo ka mid ah goolasha u dhaliyay kooxda Wolfsburg,halka goolka sedaxaad uu u dhaliyay ciyaaryahan Andre Schuerrle.
Kooxda Wolfsburg ayaa kaalinta labaad uga jirto kala horeynta horyaalka Jarmalka,waxana ay leedahay 57-dhibcood,halka kooxda Stuttgart ay ugu hooseya Horyaalka.
Kooxda Hoffenheim ayaa waxaa garoonkeeda Wirsol Rhein-Neckar-Arena 1-4 uga badiyay kooxda Borussia Moenchengladbach.
Ciyaaryahan Patrick Herrmann ayaa labo ka mid ah goolasha u dhaliyay kooxda Moenchengladbach,halka labada gool ee kale ay u kala dhaliyeen ciyaaryahanada kala ah Max Kruse iyo Raffael.
Kooxda Borussia Moenchengladbach ayaa kaalinta sedaxaad uga jirto kala horeynta horyaalka Jarmalka,waxana ay leedahay 50-dhibcood,halka kooxda Hoffenheim ay horyaalka uga jirto kaalinta todobaad,iyadoo leh 37-dhibcood.
Kooxda Bayer Leverkusen ayaa garoonkeeda BayArena 4-0 uga badisay kooxda Hamburger SV.
Ciyaaryahan Stefan Kiessling ayaa labo ka mid ah goolasha u dhaliyay koxoda Bayer Leverkusen,halka labada gool ee kale uu u dhaliyay ciyaaryahan Gonzalo Castro.
Kooxda Bayer Leverkusen ayaa kaalinta afaraad uga jirto kala horeynta horyaalka Jarmalka,waxana ay leedahay 48-dhibcood,halka kooxda Hamburger ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Kooxda Freiburg ayaa garoonkeeda Schwarzwald-Stadion 1-0 uga badisay kooxda FC Cologne.
Ciyaaryahan Mike Frantz ayaa daqiiqadii 37-aad ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Freiburg.
Kooxda FC Cologne ayaa kala horeynta horyaalka Jarmalka uga jirto kaalinta 12-aad,waxana ay leedahay 30-dhibcood,halka kooxda Freiburg ay horyaalka uga jirto kaalinta 14-aad,iyadoo leh 28-dhibcood.
Kooxda Chelsea oo Xajisatay Hogaanka Horyaalka Ingiriiska "Sawirro"